Sida loo dhagaysto warka kadib dhawaaqa digniinta ee ku saabsan Android | Androidsis
Sida loo dhagaysto warka kadib dhawaaqa digniinta ee ku saabsan Android
Ignacio Sala | | Khiyaamada Android, Tababarada
Qaylodhaanta na toosisa subax kasta, waa mid kamid ah waqtiyada ugu xun maalinta, khaasatan hadaan caado u nahay inaan soo xasuusano goor dambe. Iyada oo loo marayo xulashooyinka saacadda ee laga heli karo Android, waxaan u qaabeyn karnaa terminaalkeena si aan ugu soo kacno hees ama liiska liiska ee aan ka heleyno Spotify.
Waxaan sidoo kale gacanta ku dooran karnaa hees aan ku keydinay qalabkeena. Wax walba waa hagaagsan yihiin, laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan soo kacno oo aan ku dul rogno sariirta, sidoo kale waan sameyn karnaa soo kac adigoo ku wargelinaya howlaha joogtada ah ee Kaaliyaha Google.
Kaaliyaha Google, sida caawiye kasta oo kale, wuxuu noo ogolaanayaa inaan qaabeyno taxane howleedyo joogto ah tusaale ahaan, markaan imaado ama ka baxno guriga, markaan gaarigiisa fuulno, marka qorraxdu tagto, marka heerkul gaar ah hoos loo dhigo ama sare loo qaado ... jadwalka si toos ah ama gacanba lagu fulin karo.
Hawlaha joogtada ah ee aan ka helno Kaaliyaha Google, noo oggolow la wadaag iyaga qalabka digniinta qalabka, si marka alaarmiga uu dillaaco, indhoolayaasha si otomaatig ah kor loogu qaadi karo, qolka nalka loo shido, mashiinka qaxwada la daarto ... Waxyaalahan oo dhami waxay u baahan yihiin qalab taxane ah oo isku xidhan oo aan dhammaanteen haysan ama yeelan karin .
Laakiin ka sokoow in aad otomatiga u sameyso qaar ka mid ah jadwalka waqtiga la maqlayo saacadda alaarmiga, waxaan sidoo kale isticmaali karnaa qaar ka mid ah howlaha joogtada ah ee laga helo asal ahaan aaladdayada ama aan u abuuri karno kuwo cusub Qaar ka mid ah waxqabadyadan ayaa noo oggolaanaya dhagayso warka oo kooban. Haddii hadda laga bilaabo aad rabto inaad u kacdid dhageysiga warka, isla markaana, si kadis ah, aad u ogaato waqtiga ay saacadda dhawaaqa dhawaaqaagu soo dhaceyso, waa inaad qaaddaa tallaabooyinka soo socda:
Marka hore, waxaan helnaa arjiga Daawo qalabkeenna.
Waxaan dejinaa waqtiga aan rabno inaan soo kacno ama waxaan tafatirnaa alaarmiga in aan aasaasnay.
Marka xigta, guji Wizard joogtada ah.
Daaqadda soo socota, waxaan raadineynaa ikhtiyaarka Ka dibna bilaabi loo maqli oo aan ku baal marinno shaashadda gawaarida ee Noticias.
Kadib ilaha wararka ayaa lasoo bandhigayaa taasi waxay leedahay Kaaliyaha Google aasaas ahaan, ilaha aan ka saari karno ama ku dari karno kuwa kale haddii aanan jeclayn kuwa la heli karo.
Ugu dambeyntii, waxaan u laabanay daaqadii hore oo guji Badbaadi.
Marka xigta ee dhawaaqa digniinta uu baxayo, markaan joojinno, warku wuxuu bilaabi doonaa inuu ciyaaro laga soo xigtay ilaha aan hore u dhidibnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo dhagaysto warka kadib dhawaaqa digniinta ee ku saabsan Android
Laba tabaha taleefankaaga si aad ugu fiicnaato Android